Dumarka Xijaaban Oo Ka Qurux Badan Kana Caafimaad Badan Kuwa Aan Jirkooda Asturin (DARAASAD) - Daryeel Magazine
Dumarka Xijaaban Oo Ka Qurux Badan Kana Caafimaad Badan Kuwa Aan Jirkooda Asturin (DARAASAD)
Daraasad cusub ayaa aad uga fajicisay reer galbeedka, cilmi baaristan ayaa lagu soo daabacay joornal lagu quro arimaha cilmi nafsiga ‘British Journal of Psychology’ ayadoo wadatay ciwaanka ah ‘Xijaaabku ma Yahay Ilaaliye?’. Daraasadan ayaa soo jeedineysa in haweenka u xirta xijaabka sida joogtada ah ama jirkooda si wanaagsan u daboola ay aad ugu qanacsanyihin muuqaalka jirkooda markii loo eego dhigooda aan xijaabka xiran ama sida galbeedka u labista, daraasadan ayaa ku qeexday in xijaabka ka indha saabo haweenka ku qanacsanaan la’aanta jirkooda.
Koox ku xeel dheer cilmi nafsiga uu hogaaminaayo cilmi nafsaani u dhashay Malaysia balse ku nool Britain oo lagu magacaabo Viren Swami asagoo wax ka dhiga jaamacad ku taala U.K. oo lagu magacaabo University of Westminster. Kooxdan ayaa daraasada ku sameeyay 587 haween oo muslim ah oo ku sugan London, 369 ka mid ahna ay si joogto ah u xirtan xijaabka. Haweenkan ayaa da’dooda u dhaxeeysay 18 ilaa 70; da’ dhaxeedka uu ahaa 27. Badankood — qiyaasti boqlkiba 79 — waxey ahayeen kuwaan la qabin ayagoo kasoo jeeday Bengali, Pakistani, Indian, iyo Arab.
Swami iyo kooxdiisa ayaa ka qaaday imtixaano kala duwan hablahan kuwaaso ay ku qiyaaseen qaabkay u arkan muuqaalka jirkooda iyo sidey ugu qanacsanyihin. Imtaxanadas ayaa ka mid ahaa, inay tuseen haweeney walba sawir gacmeedyo muujinaya xubnaha haweenka, ayagoo la weeydiiyay inay ka doortan muuqalka ay la dhacaan. Haweenka xijaabka sida joogtada ah u xirta ayaa doortay muuqaalo u dhow qaabkay u labisnaayeen oo qaab jirkoodana u sameesnaa, halka kuwa aan xijaabka gashan ay doorteen muuqaalo kale taasoo tusineysa ineysan ku qanacsaneyn qaabkey u muuqdeen markas ama gabi ahaan.
Si kastoo ahaataba, waxa ku jiray su’aalo ku saabsan culeeska jirka iyo baqdintey ka qaban iney buurtaan ama haduu isbadal ku imaado qaab dhismeedka jirkooda. Haweenka sida galbeedka u labista ayaa muujiyay baqdin aad ah iyo ineysan ku qanacsaneyn qaabka jirkooda ayagoo muhiimada saara sidey bulshada u aragto taasoo ka dhigeysa kuwo sameyn yar ku yeeshaan qaab labiskooda iyo jismigooda, ayagoo lambar kore keenay cabir kasta oo lagu qiyaasayay daraasadan.
Haweenka sida reer galbeedka u labista ayaa sidoo kale u ekaa kuwo ay jiheyso macluumaad ku saabsan qurxda qiyaaliga ah. Ayagoo keenay 3.09 markii loo eego 2.43 haweenka xijaabka xirta, cabirkaan oo ugu badnaa 6. Dumarka xijaabka xirta ayaa sidoo kale waqti yar ku qaata is qurxinta ayagoo muujiyay in muuqaalkoda muhiimad saas ah u laheyn markii loo dhigo kuwa aan xijaabka xiran.
Cilmi baaristaan ayaa lagu soo gabagabeeyay in aysan aheen imaanka ay qabeen haweenka balse tahay xijaabka ay xiranyihin kaaso ka dhigaya kuwo aan saas ugu nuguleyn qurxda ama waxey ka fishaan bulshada. Sidoo kale inay ka indha saabmaan quruxda khiyaaliga ah oo haweenka sida galbeedka u labista la dhacaan.
Swami ayaa raaciyay daraasadan, ‘Ma ula jeedno daraasadan inaa dad xukuno, isla markana ma lihin in dadka wada xirtaan xijaab.’
Isha: Qj Via BJP
Qaawanaan Qurux Maahan, Talo ku socota Dumarka Sidee Hooyadu U Dhali Kartaa Ilmo Qurux Badan? Qiso Qurux badan